ElementOS_Graphite: Dekorator အတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခု Linux မှ
ElementOS_Graphite: Dekorator အတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာ
ငါတက်သွားလေ၏ KDE- ကြည့်ပါ အခြားခေါင်းစဉ် Dekorator ဖြစ်သည် ကိုခေါ် ElementOS_Graphite ကောင်းပြီ, ငါကဖန်တီးရန်ငါအသုံးပြုခဲ့သည် (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်မှုတ်သွင်းခံထားရသော) ခလုတ်ပေါ်မှာ OS X ကို y မူလတန်း OS.
တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းအတူတူဖြစ်သည် ဤဆောင်ပါး အောက်ပါလင့်ခ်မှကူးယူနိုင်ပါသည်။
ElementOS_Graphite ကို download လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » ElementOS_Graphite: Dekorator အတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာ
သင်လှည့်လည်နေသော Apple ခလုတ်များကြိုက်သည့်အရာကိုကြည့်ပါ xd
ငါရဲစွမ်းသတ္တိကသူ၏ ဦး ခေါင်းကိုထမြောက်တော်မူလျှင် ... ဆက်ပြောသည်
သူတို့ကကြည့်ကောင်းတယ်။ သိပ်မကောင်းဘူး .. ငါ kde ကိုမသုံးဘူး .. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က kde အတွက်ပါ။
ဆိုလိုတာကတော့ Dekorator ကိုအခြား Desktop Environment နဲ့သုံးလို့ရမလားမသိဘူး
XFCE အသုံးပြုသူသည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် KDE ကိုအသုံးပြုနေသည်။
ငါကြိုးစားခဲ့တာက XFCE session ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Kwin က window manager အဖြစ် ...
အေးဆေး! ငါခလုတ်အနည်းငယ်သေးငယ်စေလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအေးမြကြည့်ရှုသည်။
မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါသူတို့ကိုတကယ်သေးငယ်အောင်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုကြီးမားတဲ့မော်နီတာတွေမှာသုံးတဲ့အခါ xDDDD ကြည့်ရတာမလွယ်ဘူး၊ ဒါကချဲ့ကားပြောဆိုမှုတစ်ခုပဲ၊ ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားကတော့သူတို့ကအရမ်းသေးငယ်တယ်။ ငါ netbook များအတွက်ဗားရှင်းလုပ်ရလိမ့်မယ်။
သူတို့ကိုငါ pixel တစ်လုံးလောက်လျှော့ချလိုက်တယ်
ဟုတ်တယ်၊ ငါဆိုင်းငံ့ထားသည် have
Linux Mint 14 Nadia ကိုတစ်ဆင့်ချင်း install လုပ်နည်း
ရရှိနိုင် Slax7"အစိမ်းရောင်ချို"